Namoota Ambootti ajjeefaman keessaa tokko mucaa waggaa 13'ti - BBC News Afaan Oromoo
Namoota Ambootti ajjeefaman keessaa tokko mucaa waggaa 13'ti
Humni waraanaa dhukaasa namoota hiriiraaf ba'an irratti banee ture
Daandii konkolaattota sukkaara fe'anii darbaa jiru jedhaman dhorkuuf jiraattota magaalaa Ambootiin cufame bansiisuuf tarkaanfii humni waraanaa fudhateen, yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeeffamuu isaanii jiraattonni magaalatti bilbilaan nutti himu gabaasnee turre.
Ganama kana kan haasofsiifne itti gaafatamaan waajjira komunikeeshinii magaalaa Amboo obbo Gaaddisaa Dassaaleny, lakkoofsii namoota du'anii 8 ta'uu nutti himani.
Bakka bu'aan daayireektara meedikaalaa Hospitaala Amboo Dr. Tokkummaa Kiflees, namootni 8 ajjeefamuu himuun, namoonni 6 bakkeetti ajjeefamanii gara hospitaalichaa akka geeffaman, 2 ammoo osoo yaaliin taasifamaafi jiruu lubbuun isaanii akka darbe BBC'tti himanii jiru.
"Reeffa ijoollee hundaa arguu baadhus, kanan argee fi waahillaan koo irraas mirkaneeffadhe, hundi isaanii rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaaniiti," jedhu Doktar Tokkummaan.
"Mataa keessa kan rukutaman jiru, garaa isaarra rukutamee dhiignii hedduun waan dhangala'eef kutaa oppireeshinii keessatti kan du'es jira," jedhu.
Heedduun isaanii umuriin isaanii digdamman keessa dargaggoota jiranidha. Ega hospitaala gahanii booda warra du'an keessaa tokko shamarree yoo taatu, umuriin ishees 16 hanga 17 ta'a, jechuun ibsu.
Konkolaataa sukkaaraa fe'e dhabsisuuf Roobii irraa eegalee karaan kan cufame
Eenyummaa namoota du'anii fi akkamiin akka ajjeefaman qulqulleeffachaa jirra kan jedhan hogganaan waajjira dhimma nageenyaa Godina Shawaa Lixaa obbo Geetachoo Kumsaa, namoota ajjeefaman keessaa sadi shamarran, tokko mucaa dhiiraa waggaa 13 ta'uu mirkaneeffanneerra jedhan.
Kaleessa irraa eegalee yaaliin barbaachisu godhameefi gara manaatti kan deebi'an akka jiran fi 10 ol kan ta'an ammayyuu yaalamaa akka jiran, isaan keessas garmalee kan miidhaman akka keessatti argaman doctor Tokkummaan BBC'tti himanii jiru.
Sirni awwaalcha namoota ajjeefamanii har'a kan raawwatu akka ta'ee fi sirna awwaalchaa irratti rakkoon biraa uumamuu mala soda jedhu akka qaban jiraattonni nutti himaniiru
Sirna awwaalchaa irratti rakkoon dabalataa akka hin uumamne, dargaggoonni awwaalcha booda dafanii gara manaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa waamicha gochaa jiru nuun jedhan obbo Gaaddisaan.
"Jeequmsi dhimma sukkaaraa walqabete kun guyyoota sadii fi afur dura eegale, jaarsoliin biyyaa fi poolisiin Oromiyaas hawaasa mariisisaa turan, jijjiiramni gaariinis mul'ataa ture. Kaleessa erga humni waraanaa dabalataa dhufee booda rakkoon kun hundi kan uumame," jechuun haala magaalattiin keessa turte kan nutti himan ammo Obboo Geetaachoodha.
Wayita amma kutaalee biyyattii hedduu keessatti hanqinni sukkaaraa ni mul'ata. Sukkaara KG 1 qarshii 70tti gurguramaa jira jedhu jiraattonni magaalaa Amboo.
Mormii haaraa Ambootti uumameen yoo xiqqate lubbuun namoota 10 darbeera jedhu jiraattonni
Tiraamp Waayit Haawus gadhiisuuf qophaa'uu isaanii akeekan
Feesbuukii fi Apple maaliif wal hin jaalatani?